WatchOS 8 naseho tao amin'ny WWDC 2021 | Avy amin'ny mac aho
Toni Cortes | 07/06/2021 21:25 | Apple Watch, maro
Ny hetsika fampisehoana ny kaonferansa Apple ho an'ny mpamorona, ilay malaza WWDC, manolotra ny vaovao ho hitantsika amin'ity taona ity amin'ny rindranasan'ireo fitaovana samihafa ao amin'ny orinasa.
Y watchOS 8 dia nanana ny fizarana manokana. Betsaka ny zava-baovao atolotry ny rindrambaiko Apple Watch. Andao lazaina fa tsy misy izay tena misy ifandraisany amin'ny mpampiasa, saingy misy ny fanatsarana kely raha oharina amin'ny kinova ankehitriny. Andao hojerentsika izay nohazavaina tamintsika.
Vao avy nanolotra ny vaovao ho hitantsika amin'ity taona ity i Apple amin'ny watchOS 8. Tsy misy mahatalanjona, fa ankasitrahana fa misy fampidirana asa vaovao kely hahafahana mankafy bebe kokoa ny mety ho atolotry ny Apple Watch.
Ny fampiharana an'i Breathe dia mila fanatsarana bebe kokoa. Antsoina hoe Fahatsiarovan-tena izao, tsy miankina amin'ny fifohana rivotra fotsiny, fa manampy anao rehefa mila mifoka rivotra sy misaintsaina. Ary momba ny fifohana rivotra, azo atao koa izao ny mandrefy ny tahan'ny taovam-pisefoana mandritra ny torimaso ataonao. Endri-javatra mahaliana iray nanampy ny fanarahana torimaso.
Ireo faritra misy ambadika sary dia afaka ampidirina ankehitriny lalina raha mampiasa sary amin'ny maody fakana sary ianao. Ny fampiharana sary dia nandalo fanatsarana mahaliana sasany, nanisy fanasongadinana sy fahatsiarovana. Afaka mizara ny sarinao avy amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny Messages na Mail ianao izao.
Ny zava-baovao kely hafa dia ny hoe raha mandefa hafatra an-tanana ianao dia azonao atao ny mampiditra a emoji. Avy amin'ny Messages, azonao atao ny mitady sary alefa, ary manana fidirana haingana amin'ny sary.
Farany tafiditra ao anaty rindranasa fikarohana ireo zavatra ireo. Afaka mahita ny anao izao ianao AirTag avy amin'ny Apple Watch. Tena ilaina raha mandeha amin'ny famantaranandronao LTE ianao ary tsy mitondra ilay iPhone miaraka aminao.
Nasehon'izy ireo taminay ihany koa ny fomba anehoan'ny fampiharana Weather antsika raha hisy ny rotsakorana amin'ny ora manaraka. Tsy maintsy miandry isika raha ho hita eto amintsika koa ve izany fampahalalana izany. Amin'ny watchOS 8 dia azonao atao zarao ny mozikao avy amin'ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny app Messages.
Raha fintinina dia ireo no fanatsarana izay naseho taminay tao amin'ny keynote izay vao vita. Tsy maintsy miandry isika vao manandrana ireo voalohany betas hijerena raha misy vaovao hafa tsy mbola naseho tamintsika androany noho ny fotoana fohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » WatchOS 8 naseho tao amin'ny WWDC 2021